Madaxweynaha dowlada federaalka Soomaaliya oo u safray Addis Ababa si uu uga qaybgalo shirka urur goboleedka IGAD - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMadaxweynaha dowlada federaalka Soomaaliya oo u safray Addis Ababa si uu uga qaybgalo shirka urur goboleedka IGAD
August 5, 2016 Puntland Mirror Somalia 0
Madaxweynaha dowlada federaalka Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud.
Garowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowlada federaalka Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud ayaa maanta oo Jimce ah u safray magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia.
Madaxweynaha ayaa Addis Ababa kaga qaybgali doona shirka wadamada ku bahoobay urur goboleedka IGAD, oo maanta ka furmaya halkaas.
Dhanka kale, waxaa magaalada Muqdisho ka socda shirka madasha qaran oo u dhaxeeya hoggaamiyaasha dowlada federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka.
Shirka ayaan wali heshiis laga gaarin, waxaana looga doodayaa qodobo ay ugu muhiimsanyihiin in la qeexo wakhtiga rasmiga ah ee la qabanayo doorashooyinka dalka.
August 6, 2016 Soomaaliya oo martigelin doonta bisha September shir madaxeedka IGAD